China inokurumidza multilayer Yakakwira Tg Bhodhi ine kunyudza goridhe yemodemu vagadziri uye vanotengesa | Kangna
inokurumidza multilayer Yakakwira Tg Bhodhi nekunyudza goridhe yemodem
Chinyorwa mhando: FR4 Tg170
Apedza bhodhi ukobvu: 2.0mm
Lead nguva: mazuva gumi nemaviri
Kana iyo tembiricha yepamusoro Tg redunhu bhodhi ikakwira kune imwe nharaunda, iyo substrate inozochinja kubva ku "girazi nyika" kuenda ku "rabha nyika", uye tembiricha panguva ino inonzi girazi shanduko tembiricha (Tg) yeplate. Mune mamwe mazwi, Tg ndiyo yepamusoro tembiricha (℃) iyo iyo substrate inoramba yakasimba. Ndokureva kuti, zvakajairika pcb substrate zvinhu patembiricha yakakwira hazvingogadziri kudzikama, deformation, kusungunuka uye zvimwe zviitiko, asi zvakare zvinoratidza kuderera kwakapinza mune zvemagetsi uye zvemagetsi zvimiro (handifunge kuti iwe unoda kuona zvigadzirwa zvavo zvichioneka iyi kesi ).
General Tg mahwendefa ari pamusoro pe130 degrees, yakakwira Tg kazhinji inopfuura 170 degrees, uye yepakati Tg ingangoita anodarika zana nemakumi mashanu.
Kazhinji, Iyo pcb ine Tg≥170 ℃ inonzi yakakwira Tg redunhu bhodhi.
Iyo Tg yeiyo substrate inowedzera, uye kupisa kupisa, kusagadzikana kwehunyoro, kusagadzikana kwemakemikari, kugadzikana kusagadzikana uye mamwe maitiro ebhodhi redunhu ichavandudzwa uye nekuvandudzwa. Iyo yakakwira iyo kukosha kweTG iri, zvirinani tembiricha yekudzivirira kuita kweplate ichave iri. Kunyanya mukutungamira-kwemahara maitiro, yakakwira TG inowanzo shandiswa.
High Tg zvinoreva kupisa kwakanyanya kupisa. Iine kukurumidza kukura kweye indasitiri yemagetsi, kunyanya zvigadzirwa zvemagetsi zvinomiririrwa nemakomputa, kune kusimudzira kweakakwira basa, yakakwira multilayer, kudikanwa kwePCB substrate zvinhu yakakwira kupisa kupisa sevimbiso yakakosha. Kubuda uye kuvandudzwa kwepamusoro pekuwedzera kwekuisa tekinoroji inomiririrwa neSMT uye CMT inoita kuti pcb iwedzere uye iwedzere kutsigirwa nerutsigiro rwekupisa kupisa kweiyo substrate maererano nehuremu hudiki, yakanaka wiring uye yakatetepa mhando.
Naizvozvo, mutsauko pakati peyakajairika FR-4 uye yakakwira-TG FR-4 ndeyekuti mune inopisa nyika, kunyanya mushure mehusiku uye kupisa, simba rechimakanika, kudzikama, kuomarara, kunwa kwemvura, kuparara kwemafuta, kuwedzera kwekushisa uye mamwe mamiriro e zvinhu zvacho zvakasiyana. Yakakwira Tg zvigadzirwa zviri pachena zvirinani pane zvakajairika PCB substrate zvinhu. Mumakore achangopfuura, huwandu hwevatengi vanoda yakakwira Tg redunhu bhodhi yakawedzera gore negore.
Pashure: 3 oz solder mask plugging ENEPIG inorema mhangura bhodhi
Zvadaro: imwe chete mativi kunyudzwa goridhe Ceramic yakavakirwa Bhodhi